सोभित थपलिया « Clickmandu
अर्ब कमाउने बैंकको प्रतिफल मुद्दति निक्षेपको जस्तो, पूँजीको दबाब नहुँदा उद्योगको अत्यधिक बढी
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगानीकर्तालाई औसतमा १५.०१ प्रतिशतले लाभांश दिए ।सोही वर्ष विकास बैंकहरुको औसत लाभांश वाणिज्य बैंककै हाराहारीमा अर्थात् १५.७४ प्रतिशत
सरकारले गर्छु भनेको ३ वर्ष वित्दापनि बजार सुधारका यी १८ काम अझै पूरा भएनन्
काठमाडौं । लगातार सेयर बजारमा गिरावट आएपछि तत्कालित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साल मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । बैंकको
संवेदनशील पुँजी बजारमा नेताहरुको असंवेदनशील अभिव्यक्ति, बजारलाई प्यानिक बनाउन कसले के भने ?
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । यो बजारमा जानेका, बुझेका, अरुको लहैलहैमा लाग्ने, आफैं विश्लेषण गरेर लाग्ने हरेक खालका लगानीकर्ता छन् । जसले गर्दा कुनै व्यक्तिको
अर्थतन्त्र नजानेको भन्ने महाशयलाई चिनेको छु, ७% को आर्थिक वृद्धि गरेरै देखाउँछु: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार अर्थसमितिमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जसरी भए पनि गरेर
काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा २१ सयभन्दा धेरै सदस्य छन् । ती सदस्यमध्ये यस संस्थाका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले १५०३ जनालाई ठगिसकेका छन् । यही ठूलो ठगी प्रकरणपछि सहकारीका
रेटिङ एजेन्सी इक्रा र केयरका लगानीकर्ता मालामाल, इक्रा नेपालले दियो २००% सम्म लाभांश
काठमाडौं । नेपालमा हाल दुई वटा मात्रै रेटिङ एजेन्सी छन् । ती हुन् इक्रा नेपाल र केयर नेपाल । केयर नेपाल सञ्चालमा आएको केही वर्ष मात्रै भएको छ । त्यसअघि
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष कस्तो आउनुपर्छ ?
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र फ्रन्टलाइन नियमन गर्ने निकाय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेबोनमा यसअघिका
साना किसानमा जान सकेन कृषि कर्जा, ठूला घरानाकै पहुँच
काठमाडौं । मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने भनेर सरकारले कृषि कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । जसको मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रका साना किसान, घरेलु तथा साना व्यवसायीको पहुँचमा पुगोस् । र,
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अुनसार
इजरायल सरकारद्वारा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ल्याव सहयोग
काठमाडौं । इजरायली सरकारले महाविर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंकलाई एक्विजेसन गर्ने भएको छ । यसका लागि
कान्तिपुरको सेयर बेच्ने र अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने सिरोहियाको रणनीति, यस्तो छ व्यापारको साम्राज्य
एनबी बैंकको सेयर किन्ने विषयमा बिनोद चौधरी र मोती दुगडबीच कर्पोरेट वार, दुगड ग्रुप अदालत पुग्यो
डुबेको स्टार अस्पताल किशोरको इन्ट्रीसँगै पहिलो पटक नाफामा, अस्पताल थप्नेदेखि आइपीओ जारी गर्ने योजना